Kingdom 2019 – Myanmar Subtitles
Genre: Action, History, War Director: Shinsuke Sato Actors: Kanna Hashimoto, Kento Yamazaki, Masami Nagasawa, Ryô Yoshizawa Country: Japan Released: 16 Aug 2019 Score: 6.8 Duration: 134 min Quality: 6CH, Bluray 1080p Years: 2019 View: 2,232
2019 movie (HD mmsub)
တရုတျ series တှကေား ဗြာမြားနကွေမှာစိုးလို့ ကွားဖွတျပွီး ရုပျရှငျလေးတဈခုနဲ့မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
ဂပြနျရုပျရှငျလေးဖွဈပွီး Kingdom လို့အမညျရပါတယျ။ Menga ကနေ ရိုကျကူးတဲ့ရုပျရှငျဖွဈပွီး လူတဈယောကျအကွောငျးရိုကျပွသရုပျဖျောထားတာဖွဈပါတယျ။
သူကတော့ စဈသူကွီး Li Xin ပါ။ စဈပှဲတှကွေောငျ့ မိဘမဲ့ ဖွဈသှားခဲ့ရပွီး ကြှနျဘ၀သာသာ ဖွဈသှားတဲ့ Li Xin ဟာ စဈပှဲတှကေို မမုနျးပဲ စဈပှဲတဈပှဲရဲ့ အခရာ စဈသူကွီးတဈယောကျဖွဈဖို့ အမွဲအိမျမကျမကျနခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ Qin ခတျေရဲ့ ဘုရငျလောငျး Ying Zheng နဲ့တှဆေုံ့ခဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ နှဈယောကျအတူလကျတှဲခဲ့ပွီး Zheng ထီးနနျးဆကျခံနိုငျဖို့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Xin တဈယောကျဟာ….
၂ နာရီကြျောခနျ့ကွာမွငျ့မှာဖွဈပါတယျ။Rotten မှာတော့ 96 out of 27 review ရရှိထားပွီး Aggregator မှာတော့ 93% approve ရရှိထားပါတယျ။ ဇာတျကားကောငျးလေးမို့ ကွညျ့ရှုအားပေးကွပါအုနျး။
တရုတ် series တွေကား ဗျာများနေကြမှာစိုးလို့ ကြားဖြတ်ပြီး ရုပ်ရှင်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပြီး Kingdom လို့အမည်ရပါတယ်။ Menga ကနေ ရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြသရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ စစ်သူကြီး Li Xin ပါ။ စစ်ပွဲတွေကြောင့် မိဘမဲ့ ဖြစ်သွားခဲ့ရပြီး ကျွန်ဘ၀သာသာ ဖြစ်သွားတဲ့ Li Xin ဟာ စစ်ပွဲတွေကို မမုန်းပဲ စစ်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့ အခရာ စစ်သူကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အမြဲအိမ်မက်မက်နေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Qin ခေတ်ရဲ့ ဘုရင်လောင်း Ying Zheng နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ နှစ်ယောက်အတူလက်တွဲခဲ့ပြီး Zheng ထီးနန်းဆက်ခံနိုင်ဖို့ ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Xin တစ်ယောက်ဟာ….
၂ နာရီကျော်ခန့်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။Rotten မှာတော့ 96 out of 27 review ရရှိထားပြီး Aggregator မှာတော့ 93% approve ရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအုန်း။
Mkv.xyz Myanmar 1080P
2.73Gb Download Shorturl Myanmar 1080P
#Kingdom 2019 #Download Kingdom 2019 Full Movie #Free Kingdom 2019 Download
DVDScr XVID AC3 HQ